काठले बनाइयो पोर्स ९११ स्पिडस्टर कार! :: Setopati
काठले बनाइयो पोर्स ९११ स्पिडस्टर कार!
एजेन्सी अमेरिका, असार ८
कुनै पनि धातुको प्रयोगबिना काठबाट गाडी बन्न सम्भव होला? भए पनि गाडी कस्तो होला? यो सोच्दै गार्ह्रो सुनिन्छ किनभने धातु जसरी काठलाई कुनै निश्चित आकार दिन सजिलो छैन। झन् गाडीमा हरेक विवरणलाई ध्यानपूर्वक निर्माण गरिएको हुन्छ।
युट्युबमा 'वुडवर्किङ आर्ट' नामक च्यानल छ। यो च्यानलमार्फत गत साता एउटा भिडिओ सार्वजनिक भएको छ। जसमा एक शिल्पकारले साइप्रसको काठबाट १९८९ पोर्स ९११ स्पीडस्टर तयार पारेका छन्। काठबाट बनाइएको पोर्स ९११ स्पीस्टर सडकमा गुड्न बनाइएको गाडी भने होइन, यो काठको सानो मोडल कार हो।
काठबाट बनाइएको भएपनि झट्ट हेर्दा यो सक्कली देखिन्छ। यसमा शिल्पकारले गाडीको हरेक विवरणलाई ध्यान दिएर काठ कुँदेका छन्।
११ मिनेट लामो भिडिओको सुरूमा शिल्पकारले साइप्रसको एक टुक्रा काठ लिन्छन्। र त्यसलाई काटेर गाडीको बाहिरी भाग बनाउनबाट सुरू गर्छन्। बिस्तारै उनले गाडीको ढोका, पछाडिको भाग, पाङ्ग्रा, हेडलाइटलगायत सामग्री बनाउँछन्। र, अन्तिममा सबै पाटपुर्जालाई जोडेर फिनिसिङ गर्छन्। भिडिओको अन्तिममा यसरी काठको गाडी गुडाएर समेत देखाइएको छ।
९११ स्पिडस्टर एक स्पोर्ट कार हो र यसमा थुप्रै स–साना विवरणहरू छन्। यसको बाहिरी अनावरण निकै आकर्षक छ। भिडिओमा शिल्पकारले यस्ता हरेक कुरालाई ध्यान दिएर आफ्नो कला प्रस्तुत गरेका छन्।
भिडिओमा धेरैले शिल्पकारको कलाको तारिफ गरेका छन् भने केहीले अरू गाडीहरूको पनि काठको मोडल बनाउन माग राखेका छन्।
युट्युब च्यानल ’वुडवर्किङ आर्ट’को २.३९ मिलियन सब्स्क्राइबर छ। यो च्यानलबाट यसअघि पनि काठबाट बनाइएको ल्यान्ड रोभर डिफेन्डर ११० एकस, ल्यामबर्गिनी एभेन्टाडर एस, हुन्डाई सान्ता एफई जस्ता गाडी सार्वजनिक भएको छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार ८, २०७८, १७:१२:००